Home | Retail Master Group Web Site
Public Seminar Service
Retail Master’s Sharing Videos
Naung Moe Articles
Retail Master Group is professional Retailing, Sale & Distribution industrial consultancy service provider and based in Yangon City, Myanmar. Founded in 27 June 2010 by Mr. Aye Moe Kyaw 100% local owned since the state opened its policy and adopt market orientation system in The Republic of the Union of Myanmar. Now under this umbrella, there are operate
Retail Master Consultancy Service
Retail Master Business School
Retail Master Business Group
ဒီနေ့ဟာကျွန်တော်တို့ Retail Master Consultancy Service လုပ်ငန်းကို တရား၀င်စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ မင်္ဂလာနေ့လေးတစ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် ၁၀နှစ်ပြည့်မြောက် အောင်မြင်စွာဖြတ်သန်းလျှက်ရှိပါတယ်။ ကျွန်တာ်တို့ အကြံ‌ပေးလုပ်ငန်း ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မာအောင်မြင်အောင် ယုံကြည်စွာ လုပ်ငန်းအပ်နှံပေးခဲ့ကြသော၊ လက်ရှိလုပ်ငန်းများအပ်နှံလျှက်ရှိကြသော မြန်မာနိုင်ငံတ၀န်းလုံးရှိ လက်လီလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ဖြန့်ချီရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းများအားလုံးကို ရင်ထဲမှ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်း မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ၁၀နှစ်ပြည့်မြောက်မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ အတူတကွလက်တွဲပြီး ပိုမိုအောင်မြင်တိုးတက်အောင် ဆက်လက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကတိပေး သတင်းစကားပါးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာနေ့လေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ။
Retail Master Consultancy Service is one of the professional operational consultancy service provider for business especially retailing industry, Sale and Distribution industry in Myanmar.We are main aiming to effective business operation..
As we are specializing on Retailing and Sales & Distribution sectors, we are start introduce with “Retail Master Business School (RMBS)” for future skills development with Learn, Inspire and Grow of business people.
We take immense pleasure in introducing with our new business service which has been in the business of Distribution with Own Brand/International Brand Products especially categories of Toys and Fashionable items to..
For more than 10-years,
Retail Master has been created the business growth with learning basedworking environment for esteem clients.
အရောင်းနဲ့ဖြန့်ချိရေးနယ်ပယ်မှာ အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ Implementation (လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်မှု) ကိုအောင်မြင်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်စေဖို့ မပျက်မကွက် သင်ယူလေ့လာလေ့ကျင့်ထားရမည့် ဘာသာရပ် (၇)ခု
January 7, 2021 By Retail Admin In news No Comments
တိုက်ရိုက်အွန်လိုင်းသင်ယူမှုအစီအစဉ်အတွက် ကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းခြင်းများကို လက်ခံနေပါပြီ!
© Retail Master Group All Rights Reserved 2020 - Powered By ibiz service provider